Madaxweyne ku Xigeenka oo Daah-furay Wershad lagu Maalgeliyay $ 3 Milyan
Boorame (Dawan)- Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa caddeeyay in xukuumadda Somaliland ay diyaar u tahay, isla markaana ay soo dhawaynayso ganacsato kasta oo dalka maalgashi ku samaynaysa, sidoo kalena, ay ka go’antahay in ay la qabtaan wax kasta oo ay xukuumadda uga baahdaan.
Mudane Cabdiraxmaan Saylici waxa uu sidaasi ka sheegay mar uu shalay ka hadlayay furitaanka wershad laga hirgeliyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo soo saaraysa furaashyada iyo noocyda kala duwan ee buushashka oo lagu magacaabo Royal Industry oo ay hir geliyeen ganacsato reer Somaliland ah oo ka faa’iidaystay siyaasadda dhiiri gelinta maalgashiga ee xukuumadda Somaliland dalka ku hoggaaminayso.
Xafladda daah furka iyo xadhig ka jarista wershada oo lagu qabtay Hotel Rays ee magaalada Boorama, ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga wershadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad (Saajin), guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, maayerka degmada Borama Saleebaan Xasan Xaddi, ganacsato iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne ku xigeenka oo si rasmi ah u furay wajiga koobaad ee wershadda Royal Industry oo ay ku baxday lacag dhan saddex milyan oo Dollar, ayaa caddeeyay in xukuumadda Somaliland ay diyaar u tahay mar kasta in ay dhiirigeliso maalgashiga dalka isla markaana ay wixii dhanka dawladda ku xidhan ay diyaar ula tahay ganacsato kasta oo dalka maalgashanaysa. Waxaanu yidhi “Waxa maanta farxad iyo sharaf wayn noo ah in aan ka soo qaybgalo furitaanka wershaddani Royal Industry soo saari doonta Isbuunyadda ama Furshaanta oo ah runtii wershad ka mida wershaddaha dalku baahida wayn u qabo ee Isbuunyo ah, runtiina waxa kaliye ee wax inoo tari karaa waa gacmaheena iyo ganacsigeena oo aynu isku geyno , ka dawlad ahaana anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu cid kasta oo wax qabsaneysa la dhiirigeliyo”